प्यानलबोर्डमा मुसा पसेपछि बागबजारमा बत्ति गयो - RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal
Home प्रदेश प्यानलबोर्डमा मुसा पसेपछि बागबजारमा बत्ति गयो
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लैनचौर सबस्टेशनको प्यानलबोर्डमा मुसा पसेकोले उक्त सबस्टेशनबाट विद्युत आपुर्ती हुने क्षेत्रमा लाईन गएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार बागवजार ,राजदरबार ,लैनचौर, लाजिम्पाट, महाराजगज ,पानीपोखरी, गैह्रीधारा, ठमेल, सामाखुशी, टगाल, बवरमहल लगायतका क्षेत्रमा लाइन अवरुद्ध भएको र मर्मत टोलीले काम गरीरहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
मर्मतका लागि केही समय लाग्ने जानकारी दिँदै प्राधिकरणका सुचना अधिकारी लीला कुमारी अर्यालले केही बेरमै विद्युत सुचारु हुने जानकारी दिइन् ।
इटहरीमा बुधबारदेखि पीसीआर परीक्षण नहुने
प्रदेश १ विवेक विवश रेग्मी - October 13, 2020
इटहरी । इटहरीमा पीसीआर परीक्षण नहुने भएको छ । इटहरी उपमहामनगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामचरण चौधरीका अनुसार धरानस्थित वीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र...
Exclusive राजधानी समाचारदाता - October 13, 2020
Breaking News राजधानी समाचारदाता - October 14, 2020
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर समेत गरेका छन् । विष्णु पौडेललाई अर्थ...
Exclusive केबि मसाल - October 17, 2020
सीबीएन निर्वाचन र ट्रेड युनियन व्यवस्थापनको बाटो
प्रेमलकुमार खनाल - October 11, 2020
निजामती सेवामा आधिकारिक ट्रेड युनियन (सीबीएन)को निर्वाचन असोज २४ गते हुने भनिएकोमा मन्त्रिपरिषद्को असोज ६ गतेको बैठकबाट आगामी मंसिर २४ गते हुनेगरी निर्वाचन सारिएको...
एजेन्सी - February 28, 2020
लिम्पियाधुरा क्षेत्रको अतिक्रमण र भूभाग फिर्ता
बिचार श्यामप्रसाद मैनाली - August 31, 2020
भारतले धेरै स्थानमा नेपाली भूभाग कब्जा गरे पनि अतिक्रमित भूभागमध्ये सामरिक दृष्टिले सबैभन्दा महŒवपूर्णदेखि लिम्पियाधुरा क्षेत्रबाट नहट्ने र सुनियोजित कार्यक्रमका साथ भारत अघि बढेको...
चितवन । पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिन–नौबिसे सडकखण्डमा साना–ठूला २०० भन्दा बढी पहिरो खसेका छन् । चितवन र धादिङ जोड्ने मौवाखोलाको पुल र सडक जोड्ने भाग...
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - July 31, 2020
काठमाडौं । गत वर्ष नेपालमा आयोजना भएको १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)का दोहोरो स्वर्णधारी मन्डेकाजी श्रेष्ठ नगदसहित सम्मानित भएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस सांसद प्रभु साहको चालकलाई कोरोना पोजेटिभ
१३औं सागमा नेपालको तर्फबाट...
Breaking News राजधानी समाचारदाता - June 1, 2020
बागलुङ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले अदालतको फरार सुचीमा रहेका १०३ जनालाई पक्राउ गरेको छ । विभिन्न मुद्दाका अदालतबाट अन्तिम फैसला भई कैदी भुक्तान...
सुजीतकुमार झा - October 16, 2020
एम के माझी - October 14, 2020